Inkunz' emidwayidwa Archives | Umbele
Category: Inkunz’ emidwayidwa
UMnu uMteto Nyati, isikhulu esiphezulu e-Altron
Kuwukucasha ngesithupha ukungabuqondisi ubugwegwe emsebenzini ngoba unqena ukuthi kuzothiwa awunabo ubuntu. Isikhulu esiphezulu e-Altron uMnu uMteto Nyati sixoxe noSLINDILE KHANYILE ngaloku nokunye
ABAPHATHI abamnyama abayeke ukugwema ukuthathela abantu abangawuhloniphi umsebenzi izinyathelo ngoba besaba ukuthi kuzothiwa abanabo ubuntu. Akukho lapho isintu sigqugquzela khona ukungaziphathi kahle emsebenzini.
UDkt uSam Motsuenyane ingqalabutho kasomabhizinisi omnyama
Osomabhizinisi abancane abangalindi ukutakulwa wuhulumeni. Isho kanje inkakha enguDkt uSam Motsuenyane ixoxa noTEBOGO MOKWENA
OSOMABHIZINISI abasafufusa kumele babumbane babambisane ukuze bezobamba iqhaza elibonakalayo emnothweni, bangalindi ukukhangeza kuhulumeni. Lona wumbono wenye yezinkakha zosomabhizinisi abamnyama uDkt uSam Motsuenyane.
UMnu uVusi Mvelase ukudayisa kusegazini kuyena
Ukudayisa kusegazini kuyena kanti ubuswa wukuqala izinto ezintsha nokwenza imali ngendlela eqondile. Uxoxe noLANGA KHANYILE
UMA ubuka izinto asezenzile endimeni yezamabhizinisi, cishe lilodwa igama angachazwa ngalo – uziyamlandela.
ENEMINYAKA ewu-26 wacelwa owayenguNgqongqoshe wezokuThutha ongasekho uMnu uDullar Omar ukuthi abe wusihlalo wokuqala omnyama webhodi yenkampani ebhekelela indawo okuhamba kuyo amabhanoyi emoyeni, i-Air Traffic Navigation Services(i-ATNS).
Ingwevu kwezamabhizinisi ithi abantu abamnyama abangacabangi ukuthi izinto zizobalungela ngenxa yebala labo kuphela kodwa kumele bazikhandle futhi bafunde. Ixoxe noSLINDILE KHANYILE
ABAHOLI abakhona njengamanje eNingizimu Afrika abagculisi neze, abaziphethe kahle futhi abazi lutho. Lona wumbono kasomabhizinisi osemnkatshubomvu, uDkt uReuel Khoza.
UKhoza, ohlonishwa nakwezemfundo ngamagalelo akhe, uthe iningi labaphethe kwezepolitiki kuleli licabanga ukuthi kudingeka ukuthi litoyitoye nje kuphela ukuze libe ngabaholi kanti lokho akwanele nge-21st century.
UNksz uBusi Gumede, isikhulu esiphezulu seGoodlife Foods
Izitolo, ezokukhangisa nezamandla yizimboni asebe wusomabhizinisi kuzona futhi akanamahloni ngokuthi amanye ala mabhizinisi uwawisile. Manje uqopha umlando kwezolimo, lapho eqhamuka khona nezinto ezintsha. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
UKUGULA ngenxa yokuwa kwebhizinisi lakhe lezamandla kwamholela ekutheni azithele ebhizinisini elisha ngoba ezama ukuzelapha.